Jwxo-shiil iyo Beeshiisa oo Yeeshay Shir ay ku Go,aan Qaateen – Rasaasa News
Aug 14, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Jwxo-shiil iyo Jwxo-shiilo oo yeeshay shir, kagana tashaday, sidii ay kaga bixi lahaayeen siriq dhaqaale oo soo gaadhay sidii loo fahmayba.
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay JWXO-Shiil iyo qoyskiisa ayaa tashaday muddo hadda laga joogo 2 todobaad, waxayna arkeen in dadkii lacagaha laga qaadi jiray oo u badnaa reer Mareykan, gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ay diideen in ay bixiyaan xoolihii laga xadi jiray ee dadka walaalahood ah ee muslimiinta ah lagu leyn jiray.
Sida ay warar xog ogaal ah sheegayaan, Waxaa JWXO-shiil Xaaskiisa lagu yeeshay kiradii guriga ay LONDON ka degeneyd iyada oo ilowday waraaqo dhawr goor loo soo diray oo ay dawlada hoose doonaysay in ay soo buuxiso si kirada looga bixiyo. Waxaa kale oo isna kiradiisii lagu yeeshay guri kale oo ay Eritrea ku laheyd iyo dad dhowr ah oo u sheqeyn jiray mushahaarkoodii, furiga Eritariya ku yaala iyo shaqaalaha Jwxo-shiil u shaqeeya waxaa bixin jiray kirada Jwxo-shiil.
Waxaa kale oo isna guriyihii ay daganaayeen laga saaray, Cali dheer, Nuur Faatule iyo Maxamed Shariif oo ay xaasaskoodu kala deganaayeen, Hargeysa, Nairobi iyo Gaarisa. Waxaanan ogaanay in nimanka iyo kuwo kale oo badan oo inta badan iska tamash leeya Afrika ay biilashaas oo dhan soo mari jireen Jwxo-shiil, lacaganah ayaa waxay u badan yihiin wax loo yaqaan lacagaha kala dilka dadka [political fund].
Dhamaan waxaas oo kharash ah [marka laga reebo guriga London Jwxo-shiil oo ay dawlada Ingriisku bixiso kiradiisa] waxaa laga bixin jiray lacagta dadweynaha reer Ogaadeeniya ee Qaxootiga qurbaha ku ah laga khayaameeyo. Markii JWXO-shiil iyo qoyskiisu arintii isla qaadaadhigeen waxaa lagu heshiiyey in xubnaha dhaqaalaha gacantooda ku dhacaan, hadda kadib noqdaan dad qabiilkooda ah. Laakiinse qaylo afka lagu dhufto oo la qabto shirar iyo abaabul ay hormuud ka yihiin kuwo ay ku sheegeen magaca [calooleey]. Kuwaas oo ay JWXO-shiil Qoyskiisu hoosta kaga qoslaan ayaa weli xeradii laga guuray taagan.
Qabiilka JWXO-shiil, waxay ku heshiiyeen in lacagta inta shirkadda KAAH ugu jirta iyo wixii hadda gacanta lagu hayo loo wareejiyo wadanka koofur Afrika, sibay yidhaahdeen halkaa loogu qeybsado looguna wareejiyo Xawaalada cusub ee uu Jwxo-shiil waa dhawayd ka sameeyey Koonfur Afrika ee lagu magacaabo TARAN. Qaar iyaga ka mid ah ayaa ku dooday in Eritrea lacagta lagu qeybsado, laakiinse kuwo Kaalinka 5aad ka mid ah oo ciyaarta dhoohanayaasha lagu sirayo wax kaga jira ayaa ka cudurdaartay.
Tusaale yar hadaan idiin soo qaado. Markii Soomaaliya dagaalka sokeeye kadhacay, caruurihii dadka maamulka haystay diyaarad iyo baabuur ayey ku qaxeen bilowgii dagaalkaba, laakiinse waardiyeyaashii iyagoo halkii taagan oo leh, HEEHI WALABANYAHAY! HEEHI WALABANYAHAY! ayaa cadowgii ugu yimid oo halkii lagu laayey. Marka ina Muudey iyo Ina Aw Xuseen, waxay aaminsanyihiin dadweynaha reer Ogaadeeniya waxay ka dhageysteen cajaladihii laga qabtay ee codka ahaa, laakiinse kuwa ay yidhaahdeen HEEHI WALABANYAHAY! ayaa fadhiga loogu imaandoonaa.
Waxaana ka dhici doonta sheekadii dhurwaagii; Faaliyaa fiidba tagay, Ida gol qabada baa gar qabay, Hooyo hununuf iyo hananafow anigu hadhaye hawdka gala.
Codsiga dadweynaha dartii Furaha erayada
Jwxo-shiil – [Maxamed Cumar Cismaan]
Jwxo-shiilo – [Qabiil ku Jabhad]
rasaas runta sheegee rafiiqaaga ka yeelo